03 / 10 / 2021 03 / 10 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 259 Views စာ0မှတ်ချက် 5005254 ဟယ်ရီပေါ်တာ minifigures, ၇၆၃၈၆ HogwartPolyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwarts fluffy တှေ့ဆုံ, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း, ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု, 76394 Fawkes Dumbledore ရဲ့ Phoenix, အုတ်ဖုတ်ဖို, ပြိုင်ပွဲ, ဟယ်ရီပေါ်တာ, Ideas, ideas ပြိုင်ပွဲ, Lego, lego ခ, Lego Bricktober, Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ, Lego Ideas, Lego Ideas ပြိုင်ပွဲ, Wizarding ကမ္ဘာ့ဖလား, Wizarding Harry Potter ၏ကမ္ဘာ
မှော်ဆရာများနှင့်စုန်းမများကိုသတိပေးပါ၊ သင်၏စာရင်းများအပြီးသတ်ရန်အချိန်ကကုန်လုနီးပါ Lego Ideas ဟယ်ရီပေါ်တာ နှစ် ၂၀ ပြည့်ပြိုင်ပွဲ
ပါ ၀ င်သောဆုလက်ဆောင်များပါ ၀ င်သောအခွင့်အရေးရလိုသူများအတွက် ၇၆၃၈၆ Hogwarts: Polyjuice Potion မှားယွင်းမှု, ၇၆၃၈၆ Hogwarts: fluffy တှေ့ဆုံ, ၇၆၃၈၆ Hogwartလျှို့ဝှက်ချက်များကုန်သည်ကြီးများအသင်း နှင့် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှုအပေါင်း 76394 Fawkes, Dumbledore ရဲ့ဖီးနစ်ဤအရာသည်နောက်ဆုံးသို့ ၀ င်ရန်သင်၏နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်သည် ဟယ်ရီပေါ်တာ ပြိုင်ပွဲပြီးပါပြီ Lego Ideas.
ဤအုပ်စုကြီးစုများကိုအနိုင်ရရန်မျှော်လင့်သူမည်သူမဆိုသည်နှစ် ၂၀ ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အတွက်ဂုဏ်ပြုသည့်ဖန်တီးမှုများကိုအဖွဲ့နှင့်အတူအပ်နှံထားသော webpage တွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။ ထိုတိကျသောနံပါတ်ကိုသင်၏တည်ဆောက်မှုအတွင်းတစ်နေရာတွင်ထည့်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းအားဆေးများနှင့်အခြားစိတ်ကူးယဉ်မှော်များဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးရန်အချိန်တန်ပေမည်။
မော်ဒယ်များကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်စေ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်အရဖြစ်စေပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းစည်းမျဉ်းများနှင့်အညီပြိုင်ပွဲကိုလူတိုင်းလက်လှမ်းမီသည်။ အစောပိုင်း၌ဖော်ပြထားသောခြောက်စုံပါ ၀ င်သောဆုကြီးအထုပ်တစ်ခုသာ article သည်ကမ်းလှမ်းမှုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်အနိုင်ရနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။
အပြေးသမားနှစ်ယောက်နှင့်အတူလမ်းလျှောက်ထွက်လိမ့်မည် ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု၂၀၁၈ ရဲ့ပရိုမိုးရှင်း ၅၀၀၅၂၅၄ နဲ့အတူ ဟယ်ရီပေါ်တာ Minifigure Collection (သို့) အနည်းဆုံးပေးထားသောပုံမှာပြထားသည် Lego Ideas 6232944 Limited Edition Minifigures ကိုအခြားအရာတစ်ခုအဖြစ်စာရင်းသွင်းသည်။
မင်းရဲ့ပုံစံကိုတင်ပြဖို့အောက်တိုဘာ ၆ ရက်မနက် ၁၁ နာရီဗြိတိန်မှာမင်းရဲ့ပုံစံကိုတင်ပြဖို့ရက်အနည်းငယ်ပဲကျန်တော့တဲ့မင်းရဲ့ပုံစံကိုမင်းဒစ်ဂျစ်တယ်နဲ့ရုပ်ပိုင်းဘဲဖြစ်ဖြစ်မင်းရဲ့တည်ဆောက်မှုနဲ့မင်း Wizarding World ဖန်တီးမှုမှာတရားသူကြီးတွေကိုအထင်ကြီးစေမှာပါ။ အနိုင်ရဖို့ကံမကောင်းစွာမနေရတဲ့သူတွေကအပိုင်းသစ်ကိုဆွတ်ခူးနိုင်ပါတယ် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ ဧရာအပါအဝင်တရားဝင်အွန်လိုင်းစတိုးမှယခု ၇၆၃၈၆ Hogwarts Icons စုဆောင်းသူများ၏ထုတ်ဝေမှု.
← LEGO VIP သည်ကံစမ်းမဲများတွင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သော Fender Stratocaster ကိုကမ်းလှမ်းသည်
LEGO 71395 Super Mario 64 Question Mark သည်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုဆက်လက်ကူညီပေးသည် →